“ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလေးငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
Cambridgeshire မှအသက် ၂၇ နှစ်ရှိဂျွန်နီကသူသည်အသက် ၁၂ နှစ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
သူသည် porn ကိုအွန်လိုင်းအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ပထမမျိုးဆက်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်
အဆိုပါ y ကouth အလုပ်သမားယခုညစ်ညမ်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုလူငယ်သတိပေးဖို့မျှော်လင့်
သငျသညျ Jonny ဒမ်တွေ့ဆုံရန်ယခုအချိန်တွင်သူတစ်ဦးအတော်လေးယဉ်ကျေး, စဉ်းစားဟန်လုလင်ကိုအဖြစ်ထွက်ရပ်။ မော်တာအားကစားအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဒီဂရီနှင့်အကြိုးပွုကောင်လေး-လာမယ့်တံခါးကောင်းသောရူပနှင့်အတူသူကသင့်သားသို့မဟုတ်အနာဂတ်သား-In-ဥပဒလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့အရာအားလုံးသည်။
သို့သော်ထိုသို့ 12 အသုံးပြုပုံ Jonny ခက်ခဲ-Core အင်တာနက်တို့၏အညစ်အကြေးစွဲခဲ့သည်, ထိုညစ်ညမ်း၏နေရာအနှံ့မှသေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူသားသမီးများ၏ပထမမျိုးဆက်အတွက်တက်စိုက်ပျိုးပြီးမှ, သူမသာကျွန်တော် porn များ၏တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးသက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုကြှနျုပျတို့၏သားသတိပေးရမည်ဟုပြောထွက်စကားပြောဖြစ်ပါတယ် - ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးတို့ပြောပြရပေမည်။
Jonny ဒမ်, ယခု 27, အမာခံညစ်ညမ်းအခမဲ့ access ကိုအတူတက်ကြီးထွားလာအမျိုးသမီးများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ယခုသူသည်လုံးဝကြောင့်သပိတ်မှောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုသတိပေးဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်
Jonny, 27 အဖြစ်, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပှငျ့လငျးမှုနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြသသောကြောင့်, porn လူငယ်များရဲ့ဘဝအသက်တာ၌လိင်ပညာရေး၏အာဏာအရှိဆုံးပုံစံထက်ပိုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာအစလုလင်တို့သည်ကြည့်ရှုနှင့်အမျိုးသမီးဆကျဆံပုံများအတွက် template ကိုဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာမကြာသေးခင်က NSPCC အစီရင်ခံစာနီးပါးတဦးတည်းတဆယ်အတွက် 12 နှင့် 13 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများပြီးသားသူတို့စွဲနေကြသည်ကိုကွောကျရှံ့တွေ့ပေးထားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
Jonny ပြောပါတယ်အဖြစ်: 'Porn စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနဲ့ကျွန်မအပေါ်မျက်စိ set တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကိုထိုးဖောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအထွက်လာပါတယ်, ချောက်ကမ်းပါးသို့ငါ့ကိုဆောင် သွား. ။
'' ဒါဟာအစငါဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်ကြည့်ရှုအားပေးလမ်းကိုတခုတခုအပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထောင်ချီသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ porn မသာစိတ်ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ ဒါဟာငါ့ကိုလူသားတွေအဖြစ်အမျိုးသမီးကိုမြင်လျှင်တော့ဘူး။ ''
ဤရေတွင်းကိုတက်ဆောင် ခဲ့. , အလွန်အမင်းအသိဉာဏ်လုလင်ဖွစျနိုငျပါကဧကန်အမှန်မည်သူမဆိုမှဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
Cambridgeshire တစ်ဦးပါရွာအတွက်ပျော်ရွှင်အိမ်မှာကြီးပြင်း, Jonny အားကစား ချစ်. Academic လွန်ကဲသူတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး, အထွက်ကလေးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူအပျိုဖော်ဝင်ဝသို့ဝင်အများစုယောက်ျားလေးများသည်မိမိအသက်အရွယ်နှင့်တူသူသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်လာစတင်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်နိုးထမှုကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ငါမျက်စိကြည့်မိသောမိန်းမတိုင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု porn ကဝန်ခံသည်။ Jonny ကအမျိုးသမီးများကိုသူမြင်သည့်အတိုင်း 'အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသည်'
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူအလျင်အမြန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အချိန်၌ဂျွန်နီသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထိရောက်ခဲ့သည်။ 'ငါ့မိသားစုကကွန်ပျူတာတလုံးရှိတယ်။ ကျောင်းပြီးရင်ငါ့အမေအိမ်ပြန်မလာခင်မှာတစ်နာရီလောက်သတ်ပစ်ရမယ်'
အဆိုပါခြားနားချက် Jonny ရုံ porn ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်လျင်မြန်စွာရရှိနိုင်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည့်အခါအချိန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထိမှန်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
'' ကျွန်မရဲ့မိသားစုကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်နှင့်ကျောင်းအပြီးကျွန်မရဲ့မိခင်တစ်ဦးဆရာအဖြစ်သူမ၏အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်မရောက်မလာမှီသတ်ပစ်တစ်နာရီခဲ့ '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
mags '' ငါသည်ငါ့အစ်ကိုရဲ့အိမ်အပြန်မှာမှတဆင့်မအဝတ်နှင့်အတူမိန်းမတို့အားမိတ်ဆက်ခဲ့ '' ဒါကြောင့်ကျနော်ကုလားကာကိုဆွဲခြင်းနှင့်ကျနော် web ပေါ်မှာအခမဲ့ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအခြားဘယ်အရာကိုရှာဖွေစူးစမ်းခံခဲ့ရတာရှည်မတိုင်မီမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ''
14 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်, Jonny သူ့ကိုသူ၏အိပ်ခန်းတွေရဲ့ privacy အတွက်အင်တာနက်ကိုရယူရန်ခွင့်ပြု, သူ့ကျောင်းစာတွေအတွက်ကွန်ပျူတာပေးထားခဲ့သညျ။ အစပိုင်းတွင်သူ '' ပုံမှန် '' လိင်မြင်ကွင်းများကြည့်ရှုအားပေးကပြောပါတယ်။ သို့သော်ရှည်လျားရှေ့တော်၌ထိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့သာ access ကိုထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းမဂ္ဂဇင်းအခါကာလ၌ရှိရရှိနိုင်ဘယ်တော့မှမှောင်မိုက်လမ်းခရီးသူ့ကိုချဦးဆောင်ခဲ့သည်။
'' ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအရသာမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ “ တစ်နေ့မှာကျွန်တော့်ကိုကန်ကန်ပေးတာနဲ့ကျေနပ်အားရမှုကနောက်တစ်နေ့မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မကြာခင်မှာပဲတူညီတဲ့ရလာဒ်ကိုရဖို့အတွက်ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ခဲ့တယ်။
'' porn အဘို့အကြှနျုပျ၏အရသာ insatiable ဖြစ်လာတယ် '' ဟုသူကပြောပါတယ်။ '' အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုတစ်ကန်ကိုပေး၏တနေ့ငါ့အတဏှာကျေနပ်လာမယ့်အလုပ်မလုပ်ဘဲနေ၏။
'ငါ့ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ဘရော့ဘန်းဖို့ dial-up ကနေ သွား. လိင်၏အငြိမ်ပုံရိပ်တွေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုဗီဒီယို၏စာမကျြနှာပျေါမှာစာမကျြနှာ featuring က်ဘ်ဆိုက်များသို့လှည့်။ ' '
သူကထပ်ပြောသည်: 'ရှည်လျားမီ, ငါအတူတူပြင်ဆင်ချက်အရပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းပစ္စယစောင့်ကြည့်သို့ပို့ဆောင် - အဓမ္မပြုကျင့်မှုများကဲ့သို့ကြည့်ဖို့ရိုက်ကူးမြင်ကွင်းများနှင့်အတူတူပင်မိန်းကလေးတစ်လှည့်လည်ဖြတ်သန်းယောက်ျားတွေနိမ်ကလစ်များ။
ကျွန်မကျောင်းတွင်ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ငါ့စာမေးပွဲ၌ကောင်းသောအမှတ်ရတယ်အမျှ '' မိဘတွေကငါ့အပေါ်မှာတက်စစျဆေးဖို့မဆိုအကြောင်းပြချက်ကိုငါမြင်၏ဘယ်တော့မှဒါကြောင့်သူတို့ကကွန်ပျူတာ filter များတပ်ဆင်ဘူး။ သူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရရှိနိုင်ခဲ့သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ''
'' ကျွန်မသင်တန်း၏, ကျွန်မရဲ့မိဘတွေဆီကနေဝှက်ထားသော်လည်းငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြားအဘယ်အပြစ်ကိုမျှသို့မဟုတ်အရှက်ရှိ၏ '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
အသက် ၂၁ နှစ်မှာဒီဂရီနဲ့အတူ Jonny ဟာသူ့ရဲ့ Formula One ပြိုင်ကားကားအဖွဲ့မှာဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်သူ့အိပ်မက်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ သူဟာကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေမယ့်အစားသူကသူ့အပေါ်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ပူမိသည်
'' ငါသည်သင်တို့ကိုခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှာအခမဲ့ porn ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည့်အခါတစ်ကြိမ်တက်ကြီးထွားလာခံရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကံရေတွက်။ ငါမြင်နိုင်ခြင်းမရှိကျဘက်ကိုရှိခဲ့သည်။ ''
ရုံ Jonny အဘို့နှင့်မ - သို့သော်ပေးဆောင်ခံရဖို့စျေးနှုန်းပြီးသားရှိ၏။ သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားရက်စွဲပါင်တောင်မှမှီ, porn အမျိုးသမီးများကသူ၏အမြင် coloring ခဲ့သည်။ '' Porn ဗီဒီယိုသူ၏အခန်းကဏ္ဍယောက်ျားအသုံးပြုသောနှင့်လွှမ်းမိုးခံရဖို့ခံခဲ့ရသည်အရာဝတ္ထုအဖြစ်သူတို့ကိုပုံဖော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမိန်းကလေးများကြည့်ရှုအားပေးလမ်းကိုတခုတခုအပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့, porn ဝင်ရောက်ဖို့လူကြိုက်အများဆုံးနေ့အင်တာနက်ဒေတာပြောပါတယ်များနှင့်ဇန်နဝါရီလလူကြိုက်အများဆုံးလ။
ငါ 16 မှာကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက် 'ငါဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်သူတို့အားဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်တိုင်းမိန်းကလေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သူတို့ရဲ့အလောင်းငါ၏မွငျ့စံနမူနာအထိအသက်ရှင်နေထိုင်မပြုခဲ့ပါလျှင်ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသူတို့ထဲကပျော်စရာလုပ်ချင်ပါတယ်။ ''
သူကတက္ကသိုလ်သွားသောအခါ Jonny ကသူ့အလေ့အထလုပ်ကြဖို့ ပို. ပင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်လေးဆယ့်တစ်ရက်မှတက် porn မှာရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏လတ်ဆတ်တဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်အဘို့အကျဆင်းသွားသူမိန်းကလေးများကသူသည်သူတို့ကိုကုသလမ်းကိုထိခိုက်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။
'' ငါ့ထံသို့လိင်ရငျးနှီးသို့မဟုတ်ချစ်ခင်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ screen ပေါ်မှာမြင်သောအရာကိုထုတ်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်မြင် '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
'' ကျွန်မကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းကလေးငယ်များအမြင်အာရုံပေါ်မှာငါ့ကိုလှည့်သောအမှုတို့ကိုပြုရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာငါ့အလိုရှိသမျှအပျော်အပါးမဟုတ်ဘဲသူတို့အကြောင်းကိုခဲ့သည်။ ''
မယုံနိုင်လောက်အောင်, Jonny သည်သူ၏တောင်းဆိုမှုများမှအများကြီးခုခံတွေ့ဆုံခဲ့ဘူး။ '' မိန်းကလေးများငါမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုသိရန်သလိုပဲ - ဖြစ်ကောင်း porn သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုမြင်လျှင်ကနေ '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
Cambridgeshire တစ်ဦးပါရွာအတွက်ပျော်ရွှင်အိမ်မှာကြီးပြင်း, Jonny အားကစား ချစ်. Academic လွန်ကဲသူတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး, အထွက်ကလေးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အသက်အရွယ် 12 အသုံးပြုပုံ Jonny ခက်ခဲ-Core အင်တာနက်တို့၏အညစ်အကြေးစွဲခဲ့သည်
'' အားလုံးငါ့အအိမ်ထောင်ဖက်အတူတူပင်ပြုမူ, 'သူကပြောပါတယ်။ '' ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူပင်စျကွောစီရငျမှတ်ချက်များနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားကိုချထား၏။ အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှပေမယ် misogyny တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
'' ကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေလုပ်ဖို့ get နိုင်မည်မျှကြည့်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအကြောင်းဝါကွှားနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြောင်းမိမိတို့အဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ဖို့မိန်းကလေးတွေသဘောကျပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်ထားရှိမည်ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပြသရာ။ '
21 မှာတစ်ဒီဂရီနှင့်အတူ, Jonny တစ်ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာပြိုင်ကားကားကိုအသင်းနှင့်အတူဒီဇိုင်နာအဖြစ်သူ၏အိပ်မက်အလုပ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်စတင်ခဲ့သေးအစားကမ္ဘာ၏ထိပ်ပေါ်မှာခံစား၏, သူချုပ်ကိုင် porn နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, သူ့ကိုကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဖြစ်ကောင်းစွာအမျိုးသမီးများ၏သူ့ကိုပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများအောင်အဖြစ်, porn လည်းသူ့ကိုယ်သူသူ့ကိုပိုပြီးအရေးပါဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ '' ငါ, ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကိုမြင်လျှင် 14 လက်မယောကျ်ားဘဝနှင့်အတူ bulked-up, ယောက်ျားမှတက်ကိုက်ညီမယ့်ဘယ်တော့မှခံခဲ့ရသည်ကိုသဘောပေါက်သောအခါငါ 12 ကြီး '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
'' ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအလုပ်စတင်ခဲ့သည့်အချိန်အားဖြင့်, ငါအလုံအလောက်မကောငျးသောမလုံခြုံမှုပိုဆိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါလိင်ခဲ့သောအခါငါသင်ျခြို၏အကြိမ်ကြိမ်ခံစားခဲ့ရဒါမလုံခြုံသလိုခံစားရတယ်။
'ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံးကအတူတူပဲ။ 'ငါတို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့စီရင်ချက်မှတ်ချက်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုချထားတယ်။ မိန်းကလေးတွေကဘယ်တော့မှမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် misogyny ကတုန်လှုပ်သွားတယ် '
'ငါပြီးတော့ဒါငါနှိုးဆှနှင့်ဘာမျှမမှားငါ့ကိုစိတ်ချအသစ်ကလစ်ပ်များအတွက်ကို web ရှာဖွေခြင်းအလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပြီးနောက်ကျွန်မညနေခင်းဖြုန်းမယ်လို့အရမ်းထိတ်လန့မည်ဖြစ်သည်။
'' ထို့နောက်ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အနိမ့်ခံစားခဲ့ရ - ငါယုတျညံ့ခံစားရပြီးတစ်ဦးတည်း။ ''
ညစ်ညမ်းသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်သောအခါသူ၏အတွေးများကိုထိခိုက်ကြောင်း, မိမိဦးနှောက်သို့ယခုအချိန်အထိသူ့ရဲ့လမ်း wormed ခဲ့သည်။
'ငါဒီလိုအတွင်းခံအဝတ်အစား fetish တီထွင်ခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ဘရာစီယာသိုင်းကြိုး glimpsed သကဲ့သို့ငါသိပ်မှန်လျှင်, ငါကူးယဉျစတင်လိမ့်မည်ဟု,' သူကပြောပါတယ်။
'ငါအများကြီးအဟောင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့အဘယ်သူကို အကယ်. ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမှာသူမ၏၏အပ်သောပုံများ, မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုငါ့ဦးခေါင်းသို့ pop မယ်လို့ခဲ့ရသည်။ ' '
Jonny 24 မှာရော့ခ်အောက်ခြေကိုနှိပ်ပါ။ '' ကျွန်မလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကြောင့်သိုထားပေမယ့်အထဲမှာကျွန်မစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့၏မျှော်လင့်ချက်တက်ပေးထားခဲ့သည်။ ကျွန်မဆက်ဆံရေးအနတ္တခဲ့ကြသည်ယုံကြည်သည်။ ''
Jonny သည် ၂၄ နှစ်တွင်ကျောက်တုံးများကိုထိမိခဲ့သည်။ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှာဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းငါစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ဆက်ဆံရေးဟာအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်
ဂယ်ရီ Wilson က, Porn တွင်သစ်ကိုစာအုပ်သင့်ဦးနှောက်၏စာရေးဆရာ, Jonny porn အပေါ်ထမြောက်တော်မူလုလင်တစ်ဦးဂန္ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်ကပြောပါတယ်။
သို့သျောလညျးသူကျွမ်းကျင်သူများကသာရုံ porn စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက်မှနှိုးထလာနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေအတှေး, မလုံခြုံမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအခက်အခဲများပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အငယ်နှင့်ကြာကြာယောက်ျားလေးများပိုမိုသူတို့ဖြစ်လာသင်ယူသင်ခန်းစာများ engrained porn, ရှုမြင်ကြသည်။ အသစ်အဆန်းအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်တဏှာလွန်ကဲ fetishes ဆီသို့ဦးတည်ငယ်ရွယ် porn အသုံးပြုသူများကိုဆွဲပြခဲ့ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကတစ်ဦးစိုးရိမ်စရာလမ်းကြောင်းသစ်ပါပဲ။
porn ဦးနှောက်၏ neuro-သိပ္ပံအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုလေ့လာခဲ့ခဲ့သူ Wilson က, says: '' သုတေသနယောက်ျားလေးများ porn ကိုအသုံးပြုဖို့စတင်ချိန်မှာအငယ်တို့သည်ဖြစ်ကြကြောင်းပြသထားတယ်, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သူတို့ကပိုလွန်ကဲပစ္စည်းကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။
'' အများအားဖြင့်လူငယ်များ၏တစ်ဦးအလွတ်သဘော 2012 စစ်တမ်းများတွင်ရာခိုင်နှုန်း 63 သဘောတူ: "။ အကြှနျုပျ၏အရသာ ပို. ပို. လွန်ကဲသို့မဟုတ် deviant ဖြစ်လာခဲ့သည်" တစ်ဝက်ကစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်။ ''
Jonny ကျွမ်းကျင်သူများကသာရုံ porn စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက်မှနှိုးထလာနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေအတှေး, မလုံခြုံမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းအခက်အခဲများပါဝင်နိုင်ပါသည်။
မိမိအညစ်ညမ်းစွဲကနေသူ့ကိုယ်သူလွတ်တစ်ဦးလေလံမှာတော့ 2011 အတွက်, Jonny သူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖန်ဆင်းတော်ရှိရာမိမိအဒေသခံဘုရားကျောင်း, သွားစတင်ခဲ့သည်။
'' ငါပြန်ငါ့အသက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူဦး devaluing ၏ဆွန်းကြည့်ဖို့စတင် '' ဟုသူကပြောပါတယ်။
'ငါလိင်လူနှစ်ဦးအကြားအဖိုးတန်တစ်ခုခုကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါပြုသောအမှုများနှင့်လက်ထက်ငါ့ကိုထောက်ခံခဲ့ရာလက်ခံခဲ့သည်သူတွေကိုစကားပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ''
သူကပိုပြီးကျိုးနပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုခငျြနှင့်အတူတူပင်ပြဿနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှဆယ်ကျော်သက်ကူညီပေးနေတစ်ဦးလူငယ်လုပ်သားဖြစ်လာခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 2012 ခုနှစ်, Jonny သည်သူ၏အလုပ်ထားခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းသုံးနှစ်များတွင်သူ porn ကြည့်မထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဝန်ခံသည်: 'ဒါဟာအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့ခဲရန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကအထိငါနေဆဲငါမြင်ဗီဒီယိုတချို့၏ flashbacks ခဲ့ရသည်။ ''
Jonny စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင် 24 နာရီတစ်ရက်ရှုမြင်နိုင်သူကိုနောက်မျိုးဆက်အပေါ်ရှိစေခြင်းငှါအကျိုးသက်ရောက်မှုလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ '' ကျွန်မမကြာခဏသူတို့ကြိုက်တယ်ခံရဖို့တကိုယ်လုံးချွတ်ပြဖို့ရန်ရှိသည်ထင်သူကိုမိန်းကလေးများကသူတို့ဖုန်းများပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်များကိုဖေါ်ပြခြင်း၏ဘာမျှမစဉ်းစားတဲ့သူလူငယ်တွေ့ဆုံရန်။
ငါလုပ်ခဲ့တယ်လိုပဲ '' ဤယောက်ျားလေးများမကောင်းတဲ့အရာအဖြစ် porn ကိုမမွငျပါဘူး - မရသေးသော, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ငါသည်ဤမျိုးဆက်ကိုပြောပြချင်, နက်ဖြန်သောညစ်ညမ်းအန္တရာယ်ကင်းပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါမိန်းကလေးငယ်များငါလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းပြုမူသူကိုယောက်ျားနှင့်အတူတက်ကြီးထွားလာမှုအတွက်ကြောက်မိပါတယ်။
'' လူတွေနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်မရေမတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလုပျနိုငျထက်ပိုနည်းလမ်းနှိပ်စက်တာ။ '
စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှာတော့အားမိန်းကလေးများတည်ဆောက်ခြင်းသည်ခြေလှမ်းများ (အိုင်ကွန်စာအုပ်များ, £ 7.99): Tanith ကယ်ရီမိန်းကလေးများ, မပြတ်မတောက်၏စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။